Nyolong pethek: Kisah Momotaro dalam bahasa Igbo
Anciently ebe biri ka nne ochie. Kwa ụbọchị, nna nna oké ọhịa na-anakọta nkụ, ka nne nne ka osimiri na-asa. Mgbe asa nne gị ochie bụ, site upstream hanyutlah momo (peach) Nne m ochie ẹmende momo ouch, a nsogbu. "Nne na Nna Ochie egwu. Mgbe anya mmiri talatara nna nna kwuru, "N'ihi na nke a na nwa apụta si momo, anyị kwesịrị na-akpọ ya Momotaro." Nke ahụ Momotaro aha ya bụ.
Nne na Nna Ochie nyere Momotaro porridge, azụ ma na-elekọta ya nke ọma. Mgbe Momotaro e nyere a nnukwu efere nke osikapa, ọ ga-eri a nnukwu efere. Ọ bụrụ na Momotaro nyere abụọ ji ọkwá na osikapa, Momotaro ga-eri abụọ ọkwá. -Adịghị ihe ọ Momotaro etolite wee buru ibu. Mgbe ahụ, mgbe ọ na-akụziri gụọ otu, mgbe ahụ, ọ nwere ike ịgụ na iri. N'ihi ya Momotaro mere ama. Ke adianade do, ike bịaziri na-eme dị ike, ọ dịghịkwa onye hụrụ ụmụ na gburugburu nwere ike mpi ahụ ikike nke Momotaro. Smart, ike na nkà. Momotaro uku ụmụaka. N'ihi na Momotaro nnọọ na-akpa ọchị, nne na nna ochie na-esiwanye obi ụtọ membesarkannya.itu.
"O doro anya na nke a momo ụtọ." Momo oké na nne nne were ya me ka ya n'ụlọ.
Night rutere. Nna m ochie na nloghachi ibu nkụ. "Nne m ochie, nne nne, nna m ochie na-arahụ n'ụlọ."
"Papa ukwu, ee, welcome. Taa, nne nne-ahụ momo oké osimiri. Ugbu a ke kaboodu ... "ka nne nne, na-ewere si momo ya, tiyekwasi na a ọnwụ osisi. Mgbe ahụ, nne nne itinye a kichin mma na momo kewaa ya. Ma, ndị momo gbawara onwe ya na site na ntughari nwa na-enweghị na-akpa ọchị. Ozugbo si na nwa na-enweghị wee malite ibe ákwá. Nne na Nna Ochie-idem.
Otu ụbọchị, Momotaro chere ihu nne na nna ochie, ọdụ n'ihu nne na nna ochie na rịọrọ, sị, "Papa ukwu, na nne nne. N'ihi na m na nnukwu m na-aga imeri agwaetiti mọ ka mọ dị ka mmadụ bukọọrọ. Ị pụrụ ime ndokwa Kibi dango (a ụdị mochi achicha nwere mkpụrụ) kasị atọ ụtọ na Japan. "
Nne na nna ochie ji otu olu kwuo, sị, "Ị ka na obere. Mgbe niile ị dị obere. Gịnị ka ị na-eme ka n'àgwàetiti ghosts, na ghosts enwetaghị ya? "
Ọ bụ ezie na a machibidola ya iwu, n'agbanyeghị Momotaro. "Papa ukwu, nne nne, m nọ naanị m, ma 50 ma ọ bụ 100 mmadụ n'otu n'otu mọ a abụghị nsogbu n'ihi na m."
All nri mgbe ahụ, "ka nna nna na nne nne.
N'oge na-adịbeghị mere ndokwa Kibi dango Momotaro kasị atọ ụtọ na Japan. Mgbe ahụ Momotaro-nyere headband hachimaki, obosara ogologo ọkpa hakama na ọhụrụ obere mma-agha. Mgbe ahụ, na ya azụ na-paired flags 'Momotaro ike nọmba otu na Japan'.
Momotaro gara n'àgwàetiti ghosts.
Na oge nke na-ahapụ obodo a nkịta barked mgbe niile na-eso Momotaro.
"Momotaro, Momotaro, ị chọrọ ka na-aga?"
"N'ebe ndị mọ agwaetiti, emeri mọ."
"M ga-eso gị gaa n'àgwàetiti ghosts ka ogologo dị ka unu nye m Kibi dango."
"Ọfọn, mgbe ahụ, unu hà ka m ndị ikom. Ọ bụrụ na ị na-eri a Kibi dango ike ga betambah 1000-anọghị n'ogige atụrụ, "kwuru Momotaro nyere a Kibi dango nke akpa ma nyefee ya ndị nkịta. Nkịta wee ikom Momotaro.
Mgbe obere oge gafere, ndị ugoloọma-ịrata berkoak bịakwutere Momotaro. Mgbe ahụ, dị ka nkịta, Momotaro nye ya a Kibi dango na-eme ka akwaa na ndị ikom ya. Mgbe ahụ, oge gasịrị, enwe iti mkpu bịakwutere Momotaro. Enwe ghọrọ Momotaro si ikom mgbe a nyere a Kibi dango.
Momotaro otú general, otú ọkọlọtọ onye na-ebu nkịta, enwe otú swordbearer. Ha wee na-aga n'àgwàetiti ghosts. Wee Momotaro na ụmụ ya atọ n'ihu nnukwu ojii ụzọ ámá nke dị n'àgwàetiti mọ. Ozugbo, enwe-akụ ụzọ ámá.